Ifu elintantayo lokuhlobisa ikhaya lakho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ifu elintantayo lokuhlobisa ikhaya
Isithombe - RichardClarkson.com
Ingabe uyazithanda izinto ezihlobene nemeteorology? Ngaleso sizathu, ngokuqinisekile uzothanda ukuba nefu elintantayo etafuleni egumbini lakho lokuphumula noma ekamelweni lakho lokulala.
Kuyisibani esisebenzisanayo esikhipha imisindo yesiphepho, kepha futhi sinesipikha esakhelwe ngaphakathi esingalalela ngaso izingoma esizithanda kakhulu.
Lokhu kusungulwa kudalwe ngumklami uRichard Clarkson, ophinde waklama i-Cloud Lamp. Ifu yi-cumuliform ejwayelekile eyakha lapho isiphepho sesizowa: enkulu, ebukeka njengekhothoni, futhi-ke ngamabhawodi wombani. Iqiniso ukuthi liyigugu langempela elizojabulisa bonke abalandeli, abathanda abafundi bezemeteorology, kanye nalabo abafuna nje ukuba nento yokuqala futhi edonsa amehlo ekhaya labo.
Ifu libukeka lingokoqobo impela, kusukela lapho kuyantanta esisekelweni esikugcwalisayo sibonga amandla kazibuthe. Kodwa lesi sibani sisebenza kanjani? Inezinzwa ezisebenza lapho zithola ubukhona babantu. Lapho-ke laba bantu bazokwazi ukuzwa umbani nokuduma kwezulu. Kuyathakazelisa, awucabangi? Ngaphezu kwalokho, kusuka kunjiniyela ungashintsha ubukhulu nombala wokukhanya, akubeke kwimodi yokukhanya ebusuku noma kwimodi yomculo.
Intengo yayo, ngeke sikukhohlise, ayiphansi, kepha lezi zinto azinakushibha ngoba zisezingeni. Inguqulo encane ibiza u- $ 580, okungaba ngama-euro angama-466, nenguqulo enkulu $ 3.360 (cishe ama-euro angu-2.700 XNUMX).
Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa imali engaka, unethuba lokuthenga isibani sefu, esingakhiphi imisindo noma esinomqambi wohlelo, kodwa futhi sihle kakhulu futhi sibiza ama-dollar ayizigidi ezingama-380, okuyi-305 euro ngaphezulu noma ngaphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ifu elintantayo lokuhlobisa ikhaya
UMarco Arevalo kusho
IZINDLEKO ZAMAKHWA NGENKANI YAMAFU
Phendula kumarco arevalo
Inguzunga yeqhwa iGrey ilahlekelwa elinye ibhuloho leqhwa